Author Topic: အမောပြေဟာသမှတ်စု (Read 499380 times)
« Reply #540 on: July 29, 2011, 11:27:12 AM »
တစ်ခါတုန်းက အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ဟာ နိုက်ကလပ်တစ်ခုကို သွားကြသတဲ့..
ဖြစ်ချင်တော့ အဲဒီနေ့မှာပဲ ဘီယာတွေပရိုမိုးရှင်းလုပ်တဲ့အနေနဲ့ အခမဲ့သောက်သုံးခွင့်် ပေးတာနှင့် ကြုံနေပါရော။ ဒါနဲ့ သူတို.နှစ်ယောက်လည်း အမုန်းကဲပြီး အပီသောက်လိုက် ကြပါသတဲ့ ..မူးမူးနဲ့လမ်းလျှောက်လာရင်း အပြန်လမ်းမှာ ရူရူးပေါက်ချင်စိတ်က တားမရဆီးမရ ဖြစ်ပါလေရော..။
ဒါနဲ့ဘေးဘီ ၀ဲယာကိုကြည့်လိုက်တော့ သင်္ချိုင်းတစ်ခုတွေ့ပါသတဲ့။
ပထမအမျိုးသမီး။ ။ ဒီထဲမှာလူရှင်းတယ် ၀င်ပေါက်လိုက်ကြရအောင်...။
ဒုတိယအမျိုးသမီး။ ။ ကြာသလားလို့လုပ်လိုက်လေ...။
အဲဒီလိုနဲ့ မူးမူးနဲ့ ရူရူးပေါက်လိုက်ကြတာ ခြေထောက်တွေ ရွှဲရွဲစို ကုန်ပါလေရော ..
ပထမအမျိုးသမီးကတော့ သူ့မှာဝတ်လာတဲ့ အတွင်းခံဘောင်းဘီကိုချွတ်ပြီး သန့်ရှင်းရေးလုပ်ကာ ဘောင်းဘီကိုလွှတ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒုတိယအမျိုးသမီးမှာတော့ သူယောင်္ကျားဝယ်ပေးလိုက်တဲ့ အတွင်းခံဘောင်းဘီ အသစ်ကျပ်ချွတ်လေးဆိုတော့ မလုပ်ရက်ဖူးဖြစ်နေတယ်...
ဒါနဲ့အုတ်ဂူပေါ်မှာတွေ့တဲ့ အနီေ၇ာင်ဖဲကြိုးပြားတစ်ခုကိုယူပြီး သန့်ရှင်းရေး လုပ်ခဲ့ပါတယ်..။ ဖြစ်ချင်တော့ ကိစ္စတွေပြီးလို့ ဘောင်းဘီပြန်ဝတ်တဲ့အချိန်မှာ ဖဲကြိုးအနီလေးဟာ
ထိုအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်အိမ်ပြန်ရောက်ပြီးချိန်မှာပဲသူတို့ရဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူနှစ်ယောက်ဟာ ဖုန်းဆက်ပြီးအောက်ပါအတိုင်းပြောကြပါသတဲ့.. ။
ပထမခင်ပွန်း။ ။ ဒို့အိမ်ကဟာနှစ်ယောက်ကိုတော့ ဒီအတိုင်းလွှတ်ထားလို့မဖြစ်တော့ဘူး ဟေ့ ..။ ဒီနေ့ငါ့မိန်းမ ပြန်လာတော့အတွင်းခံဘောင်းဘီပါမလာဘူးကွာ...တစ်ခုခုတော့တစ်ခုခုပဲ ။
ဒုတိယခင်ပွန်း။ ။အေး..မင်းကဘာဟုတ်သေးလဲကွာ..ငါ့မှာ ရူးတောင် ရူးချင်နေပြီ ။ ငါ့မိန်းမပြန်လာတော့ ဂုဏ်ပြုစာတန်းတောင် ပါလာသေးတယ်။ ဘာတဲ့ “ ခင်ဗျားကိုကျုပ်တို့တပ်စုတစ်ခုလုံးကမှတ်မှတ်ရရရှိနေမှာပါ " တဲ့ကွာ။ ။
« Reply #541 on: July 29, 2011, 11:45:22 AM »
ကြက်ဖ နှင့် ကြက်မ အတွေး
ကြက်ဖက ကြက်မနောက်ကို အသည်းအသန် လိုက်သည်။
ကြက်ဖအတွေး – မိရင်လည်း မိ၊ မမိရင်လည်း သွေးပူလေ့ကျင့်ခန်း ပေါ့။
ကြက်မအတွေး – ငါပြေးတာ သိပ်များ မြန်နေလားမသိ။ကံဆိုးစွာပင် ပြေးနေသော ကြက်မကို ကားတစ်စီး ဖြတ်တိုက်သွားသည်။
အပျိုကြီးအတွေး – တွေ့လား … ကြက်မက ကြက်ဖကို မကြိုက်လို့ သူ့ ကိုယ်သူ အဆုံးစီရင်သွားတာ။
လူပျိုလေးအတွေး – တောက် … … ဒီကောင်တော့ တစ်သက်လုံးနေရ ခက်နေတော့မှာပါ။
လူပျိုကြီးအတွေး – ကြက်ဖ ပေမယ့် အတွေးကောင်းရှာတယ်။ ဟို စကားပုံအတိုင်းပေါ့။ တစ်ရက် ပျော်ချင်ရင် လမ်းပေါ်မှာရှာ၊ တစ်လ ပျော်ချင် မိန်းမယူ၊ တစ်နှစ်ပျော်ချင် မယားငယ်ထား၊ တစ်သက်လုံး ပျော်ချင် လူပျိုကြီးပဲလုပ် … တဲ့။ အင်း … ကြက်ဖခမျာ တစ်သက်လုံး ပျော်ချင်လို့နဲ့ တူပါတယ်။
ကြက်မအတွေး – ငါပြေးတာ သိပ်များ မြန်နေလားမသိ။ ကံဆိုးစွာပင် လိုက်နေသော ကြက်ဖကို ကားတစ်စီး ဖြတ်တိုက်သွားသည်။
အပျိုလေးအတွေး – အင်း- ကြက်မကို လိုက်ဖို့ ကြက်ဖတစ်ကောင်တော့ ထပ်ရှာရဦးမှာပဲ။
အပျိုကြီးအတွေး – ရှေ့မကြည့်၊ နောက်မကြည့် လိုက်တာကိုး။ သေတာတောင် နည်းသေး။
လူပျိုကြီးအတွေး – ဟီဟိ … ဟို ကြက်မတော့ ကြက်ဖ မရှိရင် တစ်သက်လုံး နေရခက်ပြီ။
ကြက်မအတွေး – ငါပြေးတာ သိပ်များ မြန်နေလားမသိ။ကံဆိုးစွာပင် ပြေးနေသော နှစ် ကောင်လုံးကို ကားက ဖြတ်တိုက်သွားသည်။
အပျိုလေးအတွေး – အစကတည်းက ကြက်ဖ မီအောင် လိုက်သင့်တယ်။
အပျိုကြီးအတွေး – ကြက်မ အပြစ် မဟုတ်ဘူး၊ ကြက်ဖ အပြစ်။
လူပျိုလေးအတွေး – အမှန်ဆို ကြက်မလေးက အရှိန် လျှော့သင့်တယ်။
လူပျိုကြီးအတွေး – ဟီဟိ … အေးရော၊ ဟင်းစားတော့ရပြီ။
« Reply #542 on: August 05, 2011, 06:25:52 AM »
ပီတာလေး ကို သူ့ အမေက ရှူးပေါက် သင်ပေးနေတာပေါ့ဗျာ...
မှတ်ရလွယ်အောင် အဆင့်တွေကို နံပတ်စဉ် တပ်ပြီး သင်ပေးတာပေါ့...
၁) ဘောင်းဘီဇစ် ဆွဲချ
၂) ဘောင်းဘီကို အောက်ချ
၃) ထိပ် အရေပြားကို ဆွဲချ
၅) ထိပ် အရေပြားကို ပြန်ဖုံး
၆) ဘောင်းဘီပြန်ဝတ် ဇစ်ပြန်တပ်
ပြီးတော့ “သားရှူးပေါက်မယ်ဆိုရင် ဒီအဆင့်တွေအတိုင်း ၁.၂.၃.၄.၅.၆ ဆိုပြီး လုပ်နော်” လို့ မှာလိုက်တယ်..။
သူ့အတွေးနဲ့သူတော့ အဆင်ကို ပြေနေတာပဲ.....
နောက်ရက်တွေလဲကျရော ပီတာလေးကို အိမ်သာထဲမှာ တွေ့မိလေရဲ့...
အဲဒီမှာ ပီတာလေး လုပ်နေတာက.... ၃-၅ ၃-၅ ၃-၅ ၃-၅ ၃-၅ ၃-၅ ၃-၅ ၃-၅ ၃-၅ ၃-၅ ဆိုပြီး အမြန်ကို ၇ွတ်နေတော့တာပါပဲ.....
Facebook မှာ သူများတင်ထားတာကို ဘာသာပြန်ပါတယ်............ နားမလည်ရင် ဘာသာပြန်တဲ့လူ ညံ့လို့ လို့သဘောထားကြပါ....း)
« Reply #543 on: August 05, 2011, 01:55:54 PM »
Wife How have you managed to get home so early today?
Husband My boss lost temper with me and shouted "Go to hell". So I came home.
A Chinese couple got married. When their baby was born, she had big, blue eyes, curly, blond hair and brown skin.
They named her ... SAM TING LONG.
Man ask to his wife on wedding night- "Are you sure I'm the first man you are sleeping with? Of course honey, I stayed awake with all the others!
70th yr old man asks his wife "do u feel sad when u see me running behind young girls?
A white couple hadablack baby.. The husband doesn't believe that it's his baby.
Husband Why the baby black?
Wife U hot, I hot, baby burnt..!
Boy Mom, why am I black and you are white?
Mom Listen Son, considering all the crazy things I did years ago, you should be thankful that you are not barking!!!
« Reply #544 on: August 09, 2011, 05:07:22 PM »
"မင်းရထားစီးရင်းနဲ့ သည်းထိတ်ရင်ဖို အဖြစ်မျိုး ကြုံဖူးလား"
"ကြုံဖူးပြီလားမောင်၊ တခါက မီးရထားစီးရင်း လိုဏ်ဂူထဲ ဖြတ်သွားတော့ မိန်းကလေး တစ်ယောက်ကို ငါ ဖက်နမ်းလိုက်တယ်။ လိုဏ်ဂူထဲက ထွက်လာတော့မှပဲ မိန်းကလေး အမေဖြစ်နေမှန်း သိတော့တာ။ အမလေး... တကယ့်ကို သည်းထိတ်ရင်ဖိုပါပဲ"
"ကျွန်တော့် မိန်းမနဲ့ ကွာရှင်းလိုက်ပြီ ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို ဂျာနယ်ထဲ ထည့်သွင်းချင်လို့ပါ"
"သတင်း အဖြစ်နဲ့တော့ ထည့်လို့ မရဘူးဗျ။ ကြော်ငြာ အနေနဲ့ ဆိုရင်တော့ ထည့်လို့ ဖြစ်တယ်။ ဒါထက် ဘာဖြစ်လို့ အဲဒီ အကြောင်းကို ဂျာနယ်မှာ ဖော်ပြချင်ရတာလဲဗျ"
"တခြား မိန်းမတွေ သိစေချင်လို့ပါ"
ဆရာဝန်- ဆေးလိပ် များများ သောက်ရင် ဘာဖြစ်နိုင်တယ် ဆိုတာ သိလား
လူနာ- ဟုတ်ကဲ့ မီးခိုးများများ ထွက်ပါတယ် ဆရာ
"ငါ့သား မင်း ကျောင်းနေတာ ကြာလှပြီ။ အခုထက်ထိ တစ်နှစ် သုံးလေးကို တစ်ဆယ်ထက် ပိုပြီး မရေတတ်သေးဘူး။ ကြီးလာရင် ဘာလုပ်စားမလဲ"
"သားသား ကြီးလာရင် လက်ဝှေ့ပွဲ မှာ ဒိုင်လူကြီး လုပ်မယ် ဖေဖေ"
အဆိုသင်တန်းတွင် သင်တန်းသူ တစ်ဦးက နည်းပြအား မေးသည်။
"ဆရာ... ကျွန်မကို ရှင်းရှင်းပဲ ပြောပါ ဆရာ။ ကျွန်မ အသံက ဘယ်နေရာမှာမှ သုံးစားလို့ မရတော့ဘူးလား"
"ဟာ.. ဒီလိုလဲ မဟုတ်ပါဘူး။ ဥပမာ- မီးလောင်တာတို့၊ ရေနစ်တာတို့၊ ဓါးပြတိုက်ခံရတာတို့ ဆိုရင် ခင်ဗျား အသံဟာ အစားထိုးလို့ကို မရဘူး။ တကယ်ပြောတာ"
"ဘယ်လိုမှို မျိုးကို စားရတယ်ဆိုတာ ဆရာ သိလားဟင်"
"ဘယ်မှို မဆို စားလို့ ရတယ် တပည့်ရဲ့... ဒါပေမဲ့ တချို့  မှိုတွေက တစ်ကြိမ်ပဲ စားလို့ရတယ်"
« Reply #545 on: August 11, 2011, 09:33:18 AM »
သူငယ်ချင်းကောင်းဆိုတာ ဘရာဇီယာ ဘာလို့ ?
ချော်ကျ ပြုတ်ကျတာက အကာအကွယ်ပေးတတ်တယ်
ပြီးတော့ရင်ထဲက နှလုံးသားနေရာနဲ့ အနီးဆုံး..........................
မေး PENIS .နဲ့ VAGINA.ဘယ်သူက စီနီယာ လဲ?
ဖြေ PENIS ကိုတွေ့ယင် က အမြဲမတ်တပ်ရပ် အရိုအသေပေးရလို့ပါ
« Reply #546 on: August 11, 2011, 09:57:49 PM »
အသံရောရုပ်ရော ကြားချင် ကြည့်ချင်စရာကောင်းတယ်
ဘောလုံးလိုသာ လှိမ့်လှိမ့် ကန်ပစ်ဖို့ပဲကောင်းတော့တယ်…။။
(၂) အကောင်းမြင် နဲ့အဆိုးမြင်
အဆိုးမြင်သမားက စိတ်မချမ်းသာစွာ ပြောသည် . . .
” ဒီထက်ပိုပြီးမဆိုးနိုင်တော့ ဘူး . . . .ဒီထက်ပိုပြီးမဆိုးနိုင်တော့ ဘူး”
အကောင်းမြင်သမားက အားတက်သရော ပြောသည် . .
“ရှိနိုင်သေးတယ် . . ရှိနိုင်သေးတယ်”
ထောင်ထဲတွင် ဖြစ်သည် ။
” မင်း ဘာမှုနဲ့ ကျတာလဲ”
” ရမ်းကားမှုနဲ့ မင်းရော . . ဘာမှုနဲ့ လဲ”
” နိုင်ငံရေးပြစ်မှုနဲ့ လေ . .
ပိုင်အိုနီးယား(တေဇလူ)တစ်ယောက်ရဲ့ ဖင်ကို ဆိပ်မိလို့”
ဆိုဗီယက် ကွန်မြူနစ်ခေတ်က ဖြစ်သည်။
အစ္စရေးရှိ အမျိုးများထံသို့ ဂျူးတစ်ယောက် စာရေးသည်။
“တို့ဆီမှာ ဘာမဆို ဈေးကြီးတယ် ၊
ကြက်တစ်ကီလိုကို ၇-ရူဘယ်တောင် ပေးရတယ်”
ဂျူးကို ကေဂျီဘီရုံးသို့ ဆင့်ခေါ်ကာ သတိပေးသည် ၊
“ ခင်ဗျား ဒီစာမျိုး ဆက်ရေးနေရင် အပြစ်ပေးရလိမ့်မယ်”
ကြောက်ကြောက်လန့်လန့် နဲ့ အိမ်ပြန်လာပြီး ဂျူးသည် မိမိဧ။် အဝေးရောက်
ညီငယ်ထံ နောက်စာတစ်စောင်ရေးသည် ။
“ တို့ဆီမှာ ပဒေသာပင်ခေတ် ရောက်နေပြီ ၊
တစ်နေ့ ငါ ဈေးဘက်ထွက်သွားတော့ ဈေးထဲမှာ ဆင်ကြီး တစ်ကောင်ကို ၄-ရူဘယ် ထဲနဲ့
ရောင်းနေတာ တွေ့တယ် . . ဈေး အင်မတန် ပေါတာပဲကွာ . . ဒါပေမယ့်
ငါမှမလိုဘဲလေလို့တွေးမိတယ် . .
နောက် ၃ရူဘယ် ထပ်ဖြည့်လိုက်ရင် ကြက်တစ်ကောင်ရပြီမဟုတ်လား
မိန်းမကြီးတစ်ဦးသည် သူမဧ။်သမီးပျိုကိုခေါ်ကာ ဆေးခန်းသို့ရောက်လာသည်။
ဆရာဝန်က အမျိုးသမီးငယ်ကိုကြည့်ကာ . .
“လူနာက သမီးမဟုတ်ဖူးရှင့် ကျွန်မပါ ”
“ အော် . . ဟုတ်ကဲ့ ဒါဆိုရင် လျှာလေးထုတ်ပြပါ အန်တီ”
၀န်ကြီးများရုံးသို့ လူငယ်တစ်ဦး အလုပ်လာလျှောက်သည်။
လုပ်လိုက လုပ်နိုင်ကြောင်းလူငယ်အား ပြောသည်။
လူငယ်က သဘောတူလိုက်ပြီး အလုပ်လုပ်ရင်း သီချင်းနားထောင်နိုင်ရန် အိမ်သာထဲတွင်
၀န်ကြီးရုံးသို့ ၀န်ကြီးတစ်ဦးရောက်လာပြီး အိမ်သာဘယ်မှာလဲဟု လူငယ်အားမေးရာ
လူငယ်က ၀န်ကြီးကို အိမ်သာသို့ လိုက်ပို့ပေးသည်။
အိမ်သာခန်းထဲသို့ ၀န်ကြီးဝင်သွားသောအခါ ကတ်ဆက်ကို လူငယ်ဖွင့်လိုက်သည်။
မြန်မာပြည်သိန်းတန်၏ “ရိုင်းတဲ့စင်ယော်´´သီချင်းသံ ငြိမ့်ညောင်းစွာ ပေါ်ထွက်လာသည်။
“ဒီနေ့ ပထမနေ့ပါခင်ဗျ´´ “အေး မင်းကိုရာထူးတိုးပေးရမယ်´´
မကြာမီ နောက်အရာရှိကြီးတစ်ဦး ရောက်လာသည်၊
အိမ်သာခန်းထဲ အရာရှိကြီးရှိနေစဉ် တွံတေးသိန်းတံ၏ “အသီးတစ်ရာ အညှာတစ်ခု´´
သီချင်းကိုဖွင့်ပေးလိုက်သည်။ ထိုအရာရှိလဲ စိတ်ကျေနပ်မှုရကာရာထူးတိုးအောင်
ထောက်ခံပေးမည်ဟု လူငယ်ကို ကတိပြုသွားသည်။
“ဒီအနားမှာ အိမ်သာရှိသလားဟေ့´´ လူငယ်ကခေါင်းဆောင်ကြီးကို လိုက်ပို့သည်၊
ထို့နောက် “နိုင်ငံတော်သီချင်း´´(ကမ္ဘာမကြေ) သီချင်းကိုဖွင့်ပေးလိုက်သည်။
စိတ်ရောဂါကုဆေးရုံကို ပြန်လည်ပြင်ဆင် မွမ်းမံနေသည်။
ဆေးသုတ်သမားသည် နံရံကို ဆေးသုတ်နေသည်။
“ ခင်ဗျား ဆေးသုတ်တံကို သေသေချာချာ ကိုင်ထားရဲ့လား”
“ ဒီလိုဆိုရင် လှေခါးကို ဖြုတ်လိုက်တော့မယ်နော်”
နိုင်ငံတော် အစိုးရမှ ဥပဒေသစ်တရပ်ကို ထုတ်ပြန်ကြေငြာလိုက်ရာဝယ်…
လက်ထပ်ထားပြီး ငါးနှစ်အတွင်းမှာ အကြင်လင်မယားတိုင်း ရင်သွေးတယောက်
ဒီတာဝန်ကို မကျေပွန်ခဲ့ရင် သက်ဆိုင်ရာမှ ကြီးကြပ်၍ ယောက်ျားတယောက်ကို
ငါးနှစ်မြောက် မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည် ကျင်းပပြီး နောက်တနေ့မှာ တော့ အခုထိ
ကလေးမရသေးတဲ့ အကြင်စုံတွဲဟာ ဒီကိစ္စကို စဉ်းစားရတော့တာပေါ့…
“မိန်းမရေ… ကိုယ်ကတော့အလုပ် သွားရတော့မယ်ကွာ။ ဒီကနေ့ သက်ဆိုင်ရာ ရုံးချုပ်က
လွှတ်တဲ့လူ လာလိမ့်မယ် ထင်တယ်။ ဘယ်တတ်နိုင်မှာလဲ အချစ်ရာ။ ကိုယ်ကမှ
အဖြစ်မရှိခဲ့တာကိုး။ မင်းသာ ဖြစ်လာသမျှကို သတ္တိရှိရှိနဲ့ ရင်ဆိုင်ပေတော့။
အဲဒီလိုပြောပြီး ခေါင်းကိုငိုက်စိုက်ဆွဲ… မျက်လွှာကို အောက်ကိုချပြီး
စိတ်ဓာတ်ကျစွာနဲ့ပဲ အိမ်ကနေ ထွက်သွားတော့တယ်။ သူ့အမျိုးသမီးကတော့
ခဏနေတော့ အိမ်ရှေ့ကနေ ခေါင်းလောင်းသံ ကြားလိုက်ရတယ်။ တံခါးဝမှာ စောင့်နေတဲ့သူက
သက်ဆိုင်ရာက လွှတ်လိုက်တဲ့ လူမဟုတ်ပါဘူး။ မွေးကင်းစအရွယ် ကလေးလေးတယောက်ကို
ဓာတ်ပုံရိုက်ပေးဖို့ လာရင်း အိမ်နံပါတ်မှားပြီး ရောက်လာတဲ့ ကင်မရာမင်း တယောက်ပါ။
“မင်္ဂလာရှိသော နံနက်ခင်းပါခင်ဗျာ။ ကျွန်တော် လာရင်းကိစ္စကတော့… ”
“သိ.. သိ.. သိပါတယ်ရှင့်… ဦး.. အဲ ကိုဘယ်သူ… ”
“ကျနော့်နာမည် ဦးဦး မှော်ဆရာ လို့ ခေါ်ပါတယ် ခင်ဗျာ… ကျွန်တော် အထူးပြုထားတဲ့
“သိ.. သိပြီးသားပါရှင်… ခဏထိုင်ပါဦး ”
“ခင်ဗျား အမျိုးသားလဲ သဘောတူမယ် ထင်ပါတယ်ဗျာ… ”
“ဟုတ်တယ်ရှင့်.. ဒီမနက်ပဲ ကျမတို့ ဒီအကြောင်း ပြောဖြစ်ကြတာပါ… ဒီကိစ္စကို
ဒီအိမ်ထဲမှာပဲ ရှင်းဖို့ မှာသွားပါတယ်။ ”
“ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ… အဆင်သင့်ဖြစ်ရင် အခုပဲ စလိုက်ကြရအောင်လေ။ ”
“ဟို… ဟိုလေ… ကျမက ဒါမျိုးတွေ အတွေ့အကြုံမရှိဖူးတော့ ဟိုဒင်း… ဘယ်ကဘယ်လိုစရမယ်
“ဒီကိစ္စအတွက်တော့ ကျနော့်ကို အားကိုးစမ်းဘာဗျာ…။ အင်း… ကျနော့်အထင်တော့
ဒီဆိုဖာပေါ်မှာရယ်… ဟောဟိုက စာကြည့်စားပွဲဘေးမှာရယ်… ရေချိုးခန်းထဲမှာ..
အင်္ကျီဗလာနဲ့။ ဒီကော်ဇောပေါ်မှာ ဆိုရင်တော့ ဘောင်းဘီတို ဒါမှမဟုတ် အပေါ်က
အဝတ်တထည်တော့ ဝတ်ထားမှ ကောင်းမယ်ဗျ။ ”
“ဘုရား..ဘုရား… အဲလောက်ကြီးတောင်လား… ”
“ဟုတ်တယ်လေဗျာ။ တခေါက်ထဲနဲ့တော့ ဘာပုံထွက်လာမလဲမှ မသိနိုင်တာ။ ပုံစံ
ခြောက်မျိုးလောက်ဆိုတော့ စိတ်ချရတာပေါ့ အမကြီးရာ။ ”
“ကျမတောင်းပန်ပါတယ်ရှင်… အခုကြားရသမျှကတော့ ဘယ်လိုမှ မအပ်စပ်လို့ပါ။ ”
“ဒီလိုပေါ့ဗျာ… ဘာကိုမှ ချုပ်တီးမထားဘဲ စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ် လွှတ်ပေးလိုက်တဲ့
အခါကျတော့ အောင်မြင်မှုက ပိုပြီး ကြီးမားတတ်တယ် မဟုတ်လား… ”
“အရင်ဦးဆုံး ကျနော် ဖန်တီးခဲ့တဲ့ ပုံတွေကို ပြချင်ပါတယ်ဗျာ။ ”
“ရှင်ဖန်တီးခဲ့တာ… အင်း… ပြလေ… ရှင့်မှာ အချိန်ရှိတယ် မဟုတ်လား။ ”
“ဟာ… အလောသုံးဆယ် မလိုပါဘူးဗျာ။ ဒီအလုပ်မျိုး လုပ်တယ်ဆိုတာ မြန်မြန်ဆန်ဆန်
ပြီးပြီးရော ဘယ်ရပါ့မလဲ… ”
“ဒီပုံကို ကြည့်ကြည့်ပါဗျာ။ ချစ်ဖို့ မကောင်းဘူးလား။ ဒီအတွက် ကျနော်
လေးနာရီတိတိ အချိန်ပေးခဲ့ရတယ်။ ထွက်လာတဲ့ ရလဒ်က လှမှလှပဲလေ။ ”
“ဟင်းးးးးး (သက်ပြင်းတွေချလိုက် တံတွေးမြိုလိုက် လုပ်နေရင်း) ဟုတ်တယ်နော်
ကလေးလေးက ချစ်စရာလေး… ဒါပေမယ့် လေးနာရီကြီးကတော့ မများဘူးလား ရှင်… ”
“ဒါပေါ့.. ဒါပေါ့… နားနားပြီး ဆက်လုပ်ရတာပေါ့… ကြည့်စမ်းပါဦးဗျာ.. ဒီအောက်က
ပုံကိုကြည့်စမ်းပါ… အဲဒီတုန်းက ကျနော်က ဘစ်စ်ကား ခေါင်မိုးပေါ်မှာ…ဗျ။ ”
“ကားခေါင်မိုးပေါ်မှာ… အမေလေး… မကြားဖူးတာတွေ ကြားနေရတယ်… ထူးဆန်းပါပေ့ရှင်။ ”
“ဒီလိုဗျ… အမျိုးသမီးတယောက်… သူကလဲ ကျနော့် အလုပ်အကိုင်ကို သိတယ်..
ယုံကြည်တယ်.. အားကိုးတယ်ပေါ့ဗျာ… သူက သူ့အမျိုးသားကို အထူးအဆန်း
ပြချင်လို့ဆိုပြီး ကျနော့်ကို အလုပ်လာအပ်တာပေါ့… အတွေ့အကြုံရှိနေတော့လဲ
အဲဒီအခေါက်က အလုပ်သဘောအရ ဆိုပေမယ့် ကျနော်က တကယ့်ကို စေတနာနဲ့ စိတ်နှစ်ပြီး
“ဟော.. ဟောဟိုပုံကိုကြည့် အဲဒါက ပန်းခြံထဲမှာ… ”
“ပန်းခြံထဲမှာဆိုတာက… လူတွေနဲ့လေ။ လူရှေ့သူရှေ့လဲ အလုပ်ဖြစ်တယ်.. ဟုတ်လား။
သူများတွေက ဝိုင်းကြည့်နေမှာပေါ့။ ”
“လူတွေကြည့်တာ မကြည့်တာ ဂရုမစိုက်ပါဘူးဗျာ… ကုန်ကုန်ပြောမယ်… ကျနော်က
လူတမျိုးဗျ။ လူတွေ ဝိုင်းအုံကြည့်လေ ကျနော့်ရဲ့ အရည်အသွေးတွေက
တောက်ပြောင်လေပဲ…။ အဲဒီတခေါက်ကတော့… ဘယ်လိုပြောမလဲ… အမေလုပ်သူက
ဗီဒီယိုမင်းသမီးဗျ… သူက အဲဒီနည်းနဲ့ နာမည်ကြီးချင်တာလေ။ အဲဒီနောက်တော့ တကယ်လဲ
ဟိုးလေးတကျော် ဖြစ်သွားတာပါပဲဗျာ။ ”
“ဗုဒ္ဓော… ဘုရား.. ဘုရား… ”
“ဟုတ်တယ်ဗျ… နေ့လည် နှစ်နာရီမှာ စလိုက်တာ ညနေ ငါးနာရီမှ ပြီးတယ်။
အဲဒီတုန်းကလောက် တခေါက်မှ မပင်ပန်းဖူးဘူးဗျာ.. တကယ်ပါပဲ။ အဲဒီအချိန်က
တုန်နေအောင် ချမ်းနေတဲ့ အချိန်ပေါ့။ လာကြည့်ကြတဲ့ လူတွေကလဲ ပြုံလို့ ခဲလို့…
အထပ်ထပ် စုအုံနေတာတင် အဝိုင်းကြီး ငါးထပ်လောက်ရှိတယ်။ လူက တအားများလေတော့
အလုပ်လုပ်ရတာလဲ သိပ် ခရီးမတွင်ဘူးလေ။ ”
“ရှင်တို့က လူအုပ်ကြီးရှေ့မှာ… အိုးရေးးးး အိုးးရေးးး ”
“ဘယ်နေရာကြည့်ကြည့် လူအုပ်ကြီးပဲ တွေ့ရတယ်။ ပရိတ်သတ်ကလဲ ပွဲကျပြီး
လက်ခုပ်တွေဘာတွေ ဝိုင်းတီးပေးကြတာဗျ။ အဲဒီမှာ အမေလုပ်သူက စိတ်တွေတိုလာတာပါပဲ…
ကျနော်ကိုယ်တိုင်ကပဲ ပွဲမပျက်အောင် ထိမ်းသိမ်းပေးခဲ့ရတာပေါ့။ နောက်တော့
ရဲတွေရောက်လာပြီး ကျနော့်ကို လူကူရှင်းပေးတယ်… အမှန်က ကျနော်က နောက်ထပ်
နှစ်ကွက် သုံးကွက်လောက် ဆွဲချင်သေးတာဗျ။ ဒါပေမယ့် ချမ်းကလဲ
ချမ်းနေကြပြီဆိုတော့… (အယ်လ်ဘမ်ကို ပြန်ပိတ်၍ ပြော) ကဲ… အခုပဲ စကြမလား… ကျနော်
“ပြောပြောဆိုဆို သူ့ရဲ့ ကင်မရာထောက်တဲ့ ထောက်ကို အိတ်ထဲကထုတ်ဖို့ ဇစ်ဆွဲသံလဲ
““ဆရာမ ..ရောင်စုံဘောလုံးကတော့ သားသားသိတယ်””
“““ငါးပြား ဆိုတာ ဘယ်လိုဟာလဲဆရာမ”””
““ဒီသေတ္တာရောတင်မှာ သေတ္တာတင်ခ ကဘယ်လောက်လဲ””
« Last Edit: August 24, 2011, 01:01:14 AM by imail »
« Reply #547 on: August 11, 2011, 10:01:12 PM »
ခွဲစိတ်ပြီးရ်ျ သတိရလာသော လူနာက ဆရာဝန်ကိုပြောသည်။
“ဒေါက်တာ ခွဲစိတ်ပြီးမှပဲ ကျွန်တော် တစ်ကိုယ်လုံး ပေါ့သွားသလိုပဲ”
“အေးဗျာ၊ ခင်ဗျားမခွဲစိတ်ခင်တုန်းက လက်နှစ်ဖက်၊ ခြေနှစ်ချောင်း ရှိခဲ့တာကလား”
“ဒေါက်တာ၊ ဆရာနုတ်လုိက်တဲ့ သွားက အကောင်းချည်း၊ နာနေတဲ့သွားက ဟိုဘက်အခြမ်းမှာ
“အေးဆေးပေါ့၊ ကျွန်တော် အဲ့ဘက်ကို ဖြည်းဖြည်းချင်းလာမှာပါဗျ”
တရားခံ - “လူကြီးမင်းရဲ့ ယောက္ခမ အသက်ကို ကျွန်တော် ကယ်ခဲ့ဖူးတယ်နော်”
တရားသူကြီး - “တခြားဘာအပြစ်ရှိသေးလဲ”
မုဆိုးဖို တရားရုံးတွင် အစစ်ခံသည်။
“ကျွန်တော် မိန်းမရေနစ်နေတယ်လို့ ထင်ကိုမထင်ဘူး၊ သူ့အော်နေပုံက
အိမ်နံရံတွင် ချိတ်ထားသော ကျားအရေခွံကို ကြည့်ပြီးမိတ်ဆွေမေးသည်။
“ဒီအကောင်ကို ခင်ဗျားဘယ်နှစ်ချက် ပစ်လိုက်ရသလဲ”
“ဘယ်လ်ို၊ ဒါဆိုဒီအကောင် ဘယ်လိုသေသွားလဲ”
လေယာဉ်မယ် - ‘ကျွန်မတို့လေယာဉ်ဟာ အသံထက်မြန်တဲ့နှုန်းနဲ့ ပျံနေပါတယ်”
ခရီးသည်အမျိုးသမီး - “လေယာဉ်မှုးကို ဒီထက်အသံတိုးတိုးပျံခိုင်းပါ၊ ဘေးခုံက
“ဘားမှာ ထိုင်ပြီးသောက်ရင် နှစ်ဖရန့်၊ ရပ်ပြီးသောက်ရင်တော့ တစ်ဖရန့်ခွဲပဲ
“ခြေတစ်ချောင်းပဲ ထောက်ပြီးသောက်ရင်ကော” ..
“အစ်မကြီး၊ ဒါကအမြန်ရထား အစ်မကြီးလက်မှတ်က ရိုးရိုလက်မှတ်ဖြစ်နေတယ်၊ ဒါကြောင့်
“အဆိုးဆုံးကို ရင်ဆိုင်ရဖို့ ပြင်ထားပေတော့”
“မဟုတ်ပါဘူး၊ ဈေးအကြီးဆုံးဆေးကို ထိုးပေးတော့မလို့”
မိမိသေလျှင် ပင်လယ်ထဲမြှုပ်ရန် ချူချာအဖိုးကြီး မှာခဲ့သည်။
ပင်လယ်ထဲတွင် အဖေ့အတွက် တွင်းတူးရင်း သားနှစ်ယောက်စလုံး
“ကြားပြီးပြီလား၊ အမေရိကန်နိုင်ငံက ဆေးတစ်မျိုးတီထွင်လိုက်တယ်
တဲ့၊ အဲဒီဆေးကို သေနေတဲ့လူရဲ့ လက်ထဲကို ထိုးထည့်လိုက်ရင် သေသူနဲ့
နှစ်နာရီ ကြာစကားပြောလို့ ရတယ်တဲ့”
“ဒါပေမယ့် သေသူကတော့ ဘာမှပြန်မပြောနိုင်ဘူးတဲ့”
« Last Edit: August 24, 2011, 12:50:41 AM by imail »
« Reply #548 on: August 11, 2011, 10:02:20 PM »
“၀မ်းနညမ်းပါတယ် ၊ မပြနိုင်ပါဘူး”
သူခိုး - “ကျွန်တော်အိမ်နဲ့ နီးလို့ပါ ၊ သိတဲ့အတိုင်းခေတ်က မကောင်းတော့
ဆံပင်ညှပ်ဆရာ “အော် ဒါလား ၊ မင်းမျက်နှာ ဘယ်ဘက်မှာ ရှိလဲဆိုတာ သိရအောင်လိုပါ”
လျို့ဝှက်ချက်များကိုကြက်တူရွှေးက ဖော်ထုတ်နေသည်။မျက်လှည့်စရာလဲ ရှက်ရှက်နဲ့
ကြက်တူရွှေး ၊သစ်သားတစ်ချပ်သာ ရေပေါ်တွင် ကျန်နေ၏။ မျက်လှည့်ဆရာလည်း သစ်သားပြားကို ဆွဲယူကာ
အိပ်ခန်းမှာ ဘာချို့ယွင်းချက်တွေ တွေ့လဲဗျ”
“ချို့ယွင်းချက် တစ်ခုတည်း ဟုတ်လား ၊ဒါဆိုကံကောင်းတယ်ဆိုရမယ်၊ ဒါနဲ့
မိန်းမ-“အပျို ဘ၀တုန်းကများ ကျွန်မကို ပိုးပန်းတဲ့ လူတွေ အများကြီးပဲ ၊ ကျွန်မက
ဆေးခန်းကို လက်မှာဒါဏ်ရာရတဲ့ လူတစ်ယောက်ရောက်လာတယ်။
"ကားတံခါးဆွဲပိတ်လိုက်တာ လက်ညှပ်သွားလို့ "
"၁၀၀ ထဲကနေ ၁ နှုတ်ရင် ဘယ်လောက်ကျန်သလဲ"
"သုံည (၂) လုံးကျန်မယ်ဆရာ"
« Last Edit: August 24, 2011, 12:57:31 AM by imail »
« Reply #549 on: August 11, 2011, 10:05:14 PM »
ဟိုတယ် ဧည့်ခန်းကောင်တာ သို့ အမူးသမား တစ်ယောက် မူးကြောင်
ရူးကြောင် နှင့် ရောက်လာသည်။
သူက ဟိုတယ်စာရေးကို ပြောလိုက်သည်။
``ဆရာ ရယ် ..... ဆရာ့ အခန်းက
ကောင်းပါတယ်။ဒီဟိုတယ်မှာ အကောင်းဆုံး အခန်းပါပဲ။´´
``ခက်ပြီ။ရပါတယ် ဆရာ ......ဆရာ့ကို
ဘာပြစ်ချက်များရှိလို့ မနေချင်ရတာလဲ ဟင်´´
(ပ)လူ။ ။ ငါလူပျိုတုန်းက မိန်းမရဖို့ ကို
(ဒု)လူ။ ။ အခုရော။
(ပ)လူ။ ။`တောင့်´ နေရာမှာ `နောင်´ ၀င်လာတာ ပါပဲကွာ။
အမတ်လောင်း ။ ။ ကျွန်တော်တို့ဟာ
ဒီကနေ့အခြေအနေအရ ဂျုံကို ပိုစိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
လူပြောင်တစ်ဦး။ ။ မြက်ကိုပိုစိုက်ဖို့မလို ဘူးလားခဗျာ။
အမတ်လောင်း ။ ။ အခုကျွန်တော် တင်ပြဆွေးနွေးနေတာ
ခင်ဗျားနှစ်သက်တဲ့ မြက်အကြောင်းကိုလည်း တင်ပြမှာပါ။
ကျား။ ။ မင်းတို့မိန်းမတွေဟာ မသင်ဘဲ တတ်တာဆိုလို့
မ ။ ။ ရှင်တို့ယောက်ကျားတွေကတော့သင်ပေးရင်တောင်
ကျား။ ။ အဓိပ္မယ်မရှိလိုက်တာကွာ။သင်ရင် ဘာမဆိုတတ်တယ်ကွ။
မ ။ ။ စိန်လိုက်လေ။ ဒီနေ့ကစပြီး ရှင့်ကို
ကျား။ ။ ဟမ်မ်မ်မ်...........။
``မင်း ကိုယ့်ကို အဲဒီ မျက်နှာပုံစံမျိုးနဲ့ အကြာကြီး
မကြည့်နဲ့လေ။ ကိုယ်မနေတတ်တော့ဘူး။မင်းကို ကိုယ် နမ်းမိတော့မယ်။´´
``နမ်းမယ်ဆိုလည်း မြန်မြန် နမ်းလိုက်လေ။ကျွန်မ
အဲဒီလိုမျက်နှာပုံစံမျိုး အကြာကြီး လုပ်မထားနိုင်ဘူး။
« Last Edit: August 12, 2011, 09:09:28 AM by tunaye2011 »